Ugg ji ụdị ọhụrụ a, mmiri na-egbochi mmiri dochie akpụkpọ ụkwụ atụrụ ya kacha ewu ewu - Ụdị
Ọ nwere ike ịdị ogo 95 na iru mmiri ebe ị nọ, mana anyị ga -ekwu maka akpụkpọ ụkwụ oyi. Ee, ị gụrụ nke ọma ... akpụkpọ ụkwụ oyi!
Kedu ihe kpatara anyị ji ekwu maka akpụkpọ ụkwụ oyi na ihe nwere ike bụrụ ụbọchị oke ikuku North East hụrụ n'oge ọkọchị? N'ihi na akpụkpọ ụkwụ anyị na-aga buh-bye. Ugg, onye na -ewepụta akpụkpọ ụkwụ atụrụ afọ iri atọ, na -akwụsị ụdị ya kacha ewu ewu , Omuma. Mana tupu ị gawa ide ihe na-akpasu iwe maka ịhụnanya akpụkpọ ụkwụ mbụ gị, nweta nke a: Ihe kpatara Ugg na-ewepụ akpụkpọ ụkwụ ya siri ike bụ iji nweta ohere. Omuma II ($ 160) akpụkpọ ụkwụ oyi nke ọhụrụ, nke zoro ezo karịa ka ọ dị na mbụ. Ha na -ekwekwa nkwa na anyị ga -ahụ ha n'anya karịa ka ị hụrụ ndị ochie gị.
N'eziokwu niile, Classic II dị ka nke izizi. Ị ga -ahụ obere esemokwu, dị ka ịzọ ụkwụ siri ike karị n'elu, yabụ ị nwere ike iyi ụmụ nkịta ndị a mgbe ice ojii na nsogbu oyi ndị ọzọ na -eme. Akara ahụ pere mpe na azụ, na ọkpọkọ n'akụkụ dị ntakịrị, mana ị nweghị ike ịhụ akụkụ kacha mma: Ha bụ mmiri na unyi na -eguzogide . Yabụ na ọnweghị mmiri ma ọ bụ ntụpọ nnu na akpụkpọ ụkwụ gị! Enwere m ike ịnweta yasss? Ugg nwere akụkọ a na -ekpori ndụ, o gosikwara anyị na ọ nwere ike iji aplombụ na -ejikwa ntụpọ nkịtị kwa ụbọchị ... na ụfọdụ ... ọ bụghị nke ọma.
Ha nwere ike ịlụ ọgụ mmiri ozuzo ...
Na ọbụna cappuccino efesa ...
Na heck, ọ bụrụ na ị nwere ihe maka ihe oriri na -atọ ụtọ, were onwe gị kpuchie na ngalaba ntụpọ Sriracha ...
Ugbu a, anyị ga -agba akaebe na nkwupụta ndị a, n'ihi na maa ihe: Anyị nwalere onwe anyị n'aha sayensị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime anyị (ahem, m) enweghị ike ịkwụsị ntụpọ ahụ ịwakpo uwe m ndị ọzọ (hey, kwụsị ikpe ikpe!), Akpụkpọ ụkwụ ahụ guzoro ọtọ.
Ugbu a, nụrụ kpakpando mkpuchi mkpuchi anyị dị egwu, Mila Kunis, na Tinder, iko nsọ nwanyị, yana isi ihe ọ bụla dị egwu dị ugbu a ...
kedu ka ikiri nwanyi di
ntutu ọla ọcha nwere odo odo n'okpuru
agba ntutu maka ọdịda 2020